Xbox ee iPhone, waa muhiim haddii aad haysato qalabka Microsoft | Wararka IPhone
Xbox ee iPhone, waa lagama maarmaan haddii aad haysato qalabka Microsoft
Maalmahan ma tixgelin kartid inaad haysato a wax soo saarka guuleysta dhanka teknolojiyadda oo aan lahayn barnaamij wehel u ah iPhone-ka, Microsoft-na way ka warqabtay tan iyo bilowgii. Taasi waa sababta shirkadda Redmond ay ugu qoondaysay barnaamijkeeda agab aad u tiro badan saaxiibka loogu talagalay Xbox, waana waqtigii si dhow loo fiirin lahaa.
2 Ka badan
Hadafka ugu weyn ee dalabku waa inaan qaban karno ficilo gaar ah si ka dhakhso badan sidii aan uga shaqeyn lahayn qalabka ciyaarta ee fog. Sidaa darteed waa wax aad u xiiso badan in loo isticmaalo arjiga loogu talagalay maaraynta farriimaha gaarka loo leeyahay isticmaalayaasha kale, si aad uqorto qoraalka (waxay ubaahantahay inaad isla shabakada WiFi) ama inaad aragto liiska asxaabta intaad ciyaareyso adigoon ciyaarta hakad galin, tusaale ahaan.
Intaas waxaa sii dheer, dalabku wuxuu noo ogolaanayaa inaan sameyno wixii aan rabno, tusaale ahaan shaqada iyo in markaan guriga laabano ciyaartu mar horeba tahay lagu soo dejiyey xbox, Had iyo jeer maskaxda ku hayno in aanaan haysan karin ikhtiyaarka Tamarta keydinta ee ka hawlgala qalabka ciyaarta, maaddaama qalabka loo yaqaan 'Console' ay tahay inuu ilaaliyo isku xirka shabakadda si uu u soo degsan karo ciyaaraha intuu maqan yahay
Sidoo kale waxaa xusid mudan quudinta bilowga ah ee aan kula socon karno wax walba oo ka dhacaya hareeraha konsoleheena: dhaqdhaqaaqa u dhexeeya asxaabta, fiidiyowyo iyo qabasho laga helo xiriiradayada, wararka ku saabsan ciyaaraha aan leenahay ama ogeysiisyada ka socda Microsoft waa qaar ka mid ah waxyaabaha aan ku daawan karno qaybtaan.
Suurtagalnimada mid ka mid ah qodobada ugu xiisaha badan ha noqoto ogeysiisyada riixaya, ee na ogeysiinaya dhammaan dhacdooyinka iyada oo aan loo baahneyn in lagu daro qunsulka ama la furo websaydhka Xbox. Sidaa darteed waxaan ka heli karnaa wixii ku saabsan helitaanka farriinta ama waxa ka dhacaya naadigeenna laga helo iPhone-ka wakhti kasta oo maalinta ka mid ah. Waa in la ogaadaa in barnaamijka aan loo qaabeyn karin si uusan u helin ogeysiisyo ku saabsan guulaha, taas oo xoogaa dhib ah ku noqon karta kuweena doonaya inay ogaadaan waqtiga fariimaha gaarka loo leeyahay laakiin ma daneyno inaan helno ogeysiis mar kasta oo aan hel Gs cusub.
Codsigu waa gabi ahaanba waa bilaash, waxaa ka maqan xayeysiin dhowr sano ka dib aakhirkiina waxay ku shaqeysaa xawaare la aqbali karo, in kastoo tani ay sidoo kale sabab u noqon karto fudeydka badan ee iPhone 7, dabcan. Noqo sida ay noqon karto, muhiim haddii aad leedahay Xbox.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Xbox ee iPhone, waa lagama maarmaan haddii aad haysato qalabka Microsoft
Podcast 8x18: IPhone 8 wuxuu bilaabaa inuu keeno dareen